Published Thu Oct 03 2019 18:37:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nigerian President Muhammadu Buhari, right, and South Africa's President, Cyril Ramaphosa, left, leave a press briefing in Pretoria, South Africa Thursday, Oct.3, 2019. Buhari is visiting South Africa after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
Nigerian President Muhammadu Buhari inspects a guard of honour at a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting South Africa's leader, Cyril Ramaphosa, after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
A guard of honour prepare for the arrival of Nigerian President Muhammadu Buhari at a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting South Africa's leader, Cyril Ramaphosa, after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
Nigerian President Muhammadu Buhari, left, stands with South Africa's leader Cyril Ramaphosa for the playing of the national anthems at a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
Nigerian President Muhammadu Buhari, left, and South Africa's President Cyril Ramaphosa attend a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting South Africa after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
Nigerian President Muhammadu Buhari attends a meeting with South Africa's President, Cyril Ramaphosa, after a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting South Africa after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
South African President, Cyril Ramaphosa, attends a press briefing after meeting with Nigerian President Muhammadu Buhari, in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting South Africa after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
Nigerian President Muhammadu Buhari inspects a guard of honour at a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa Thursday, Oct.3, 2019. Buhari is visiting South Africa's leader, Cyril Ramaphosa, after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
Nigerian President Muhammadu Buhari, left, and South Africa's President, Cyril Ramaphosa, hold a press briefing in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting South Africa after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
A guard of honour for Nigerian President Muhammadu Buhari at a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa Thursday, Oct. 3, 2019. Buhari is visiting South Africa's leader, Cyril Ramaphosa, after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)
Nigerian President Muhammadu Buhari, left, and South Africa's President, Cyril Ramaphosa, after a press briefing in Pretoria, South Africa Thursday, Oct.3, 2019. Buhari is visiting South Africa after a wave of attacks on foreigners angered many African countries and led to an extraordinary airlift to take hundreds of Nigerians home. (AP Photo/Themba Hadebe)